Prostar chemicals Co.,Ltd.
PROSTAR CHEMICALS CO., LTD.
1.Household & Industrial Application
2.Cosmetic & Personal Care
3.Coating , Paint, Ink, Adhevise, Plastic & Rubber
Personnel to store hazardous materials
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းလူမျိုးတည်ဆောက်သောကုမ္ပဏီကို ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဓာတုပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်စီးပွားရေးလုပ်ပါသည်။ နှင့် ဆပ်ပြားမှုန့်၊ ဖြူအောင်လုပ်ဓာတု၊ ရေစေးချွတ်ဓာတ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာဂရုစိုက်ဓာတု၊ ပိုသတဓာတု၊ ရေကုသခြင်း၊ အထည်၊ ကော်၊ အရောင်၊ မင်ရည်၊ ကြွေရည်၊ ပေါ်လီမာ၊ ပလတ်စတစ်နှင့် စက်ရုံဓာတုဒေဗပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အတူ ပတ်သက်သောစက်ရုံများအား ဓာတုပစ္စည်းရောင်းချပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏မစ်ရှင် အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အရည်အသွေးရှိသောဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းသာ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် အရည်အသွေးရှိသောဝန်ဆောင်မှုသည် ခေတ်ဆန်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကို တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
Prostar Chemicals Co.,Ltd. အဓိကဦးတည်ချက် ဆိုတာ ငွေအပ်နှံသူ၏တစ်ပိုင်းဖြစ် (နှင့်) ပုံမှန်အနာဂတ်၏ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲခြင်း ဆီလျော်စေရန် ကုမ္ပဏီတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးနှင့် အရည်အသွေးရှိသောဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
Name : Prostar Chemicals Co., Ltd.
Established : Jan, 1998
Shareholders : THAI 100%
* Albemarle Singapore Pty.Ltd.
* Aquapharm Chemical Pvt. Ltd., India
* Cindu Chemicals BV., Holland
* Clariant Chemicals (Taiwan) Co., Ltd.
* www.Henan Xunyu Chemical Co., Ltd.
* www.Martinwerk GmbH
* www.Minera Santa Rita S.R.L.
* PMC Marketing UK.
* SIQ - Kunstharze GmbH, Germany
* Solvay (Thailand) Ltd.
* Sud Chemie S.A. (Pty) Ltd., South Africa
* www.Van Mannekus & Co bv.
* www.VIORYL S.A.
1. Industrial Cleaning & Disinfectants
2. Institutional & Household Cleaning
4. Textile & Fabric Care
5. Coating, Adhesive, Paints & Inks
7. Plastics & Rubbers
10. Specialty Chemicals
Copyright 2015 Prostar chemicals Co., Ltd. All Rights Reserved.